mainNews – Page 405 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
महन्थ ठाकुरकी छोरीको आँखामा खुर्सानीको धुलो दलेर ब्रिफकेस लुटियो
भक्तपुर । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सानो ठिमीस्थित घरबाट अपरिचित एक व्यक्तिले ब्रिफकेस लुटेर फरार भएको छ । ठाकुरकी छोरी ३२ वर्षीया डा मीनाक्षी ठाकुरलाई आक्रमण गरी ब्रिफकेस लुटेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ । गएराति करिब साढे सात बजे मास्क लगाएको अपरिचित व्यक्तिले ठाकुरकी छोरी र काम गर्ने अर्का एक व्यक्ति […]
बस र ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा १२ घाइते
चितवन । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत राप्ती नगरपालिका–३ पिप्लेमा शनिबार बिहान सवा सात बजे बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् । काठमाडौँबाट कलैयातर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ३७४३ नम्बरको बस र नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना ६ ख ६७९३ नम्बरको ट्रक एकापसमा ठोक्किएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकको अगाडिका दुवै […]
सिरियामा शान्ति स्थापनाका लागि एकसाथ अघि बढ्न अमेरिका र रुस सहमत
काठमाडौं । सिरियामा सन् २०११ देखि जारी हिंसा अन्त्यका लागि सामूहिक रुपमा प्रयास गर्न अमेरिका र रुस सहमत भएका छन् । अमेरिका र रुसबीचको सहमतिअनुसार अब दुवै देशले आगामी सोमबारदेखि विद्रोहीविरुद्ध सामुहिक रुपमा कारबाही थाल्नेछन् । दुई देशबीचको यो सहमतिसँगै एकआपसमा सत्रुता समेत कम हुने भएको छ । सिरियामा विद्रोहीविरुद्ध एकीकृत कारबाही अभियानपूर्व सिरिया सरकारलाई […]
साउदीविरुद्ध मुद्धा लगाउन अमेरिकी संसदको स्वीकृति
एजेन्सी । अमेरिकी कंग्रेसले सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी आक्रमणका मारिएका पीडितका परिवारलाई साउदी अरबविरुद्ध मुद्दा लगाउने स्वीकृति दिने विधेयक पारित गरेको छ । सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणको ठीक १५ वर्षपछि अमेरिकी संसदले साउदीविरुद्ध मुद्धा लगाउन सक्नेगरी विधेयक पारित गरेको हो । गत मे महिनामा सिनेटले स्विकृति दिएको यो विधेयक अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस […]
देशैभरिबाट क्रान्तिकारी माओवादीले भने, ‘राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली सम्झौता- खारेज गर !’
मूलबाटो संवाददाता । २५ भदौं, काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै २४ भदौंमा देशैभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । पार्टीको पूर्व घोषित योजना अनुसार पार्टीको नेवा राज्यलगायत देशका सबै जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शनहरु भएका छन् । क्रान्तिकारी माओवादीको नेवा राज्यले दिउसो ३ ः३० मा रत्नपार्कको शान्तिबाटिकाबाट निकालेको ¥याली पुरानो बसपार्क, भद्रकाली, […]
सिरियाली विद्रोही संगठनका वरिष्ठ नेता मारिए
दमास्कस । सिरियाली विद्रोही संगठन अल नसुरा फ्रन्टका वरिष्ठ नेता अबु ओमर सकरावको मृत्यु भएको छ । सिरियाको व्यापारिक राजधानीका रुपमा परिचित एलेप्पो शहर नजिक भएको हवाई आक्रमणमा वरिष्ठ नेता सकरावको मृत्यु भएको जनाइएको छ । अल नसुराका नेता जवता फते सामले ट्वीटरमार्फत् कमान्डर सकरावको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् । तर कुन कसले गरेको […]
क्रान्तिकारी माओवादीले बुटबलमा सभा गर्दै
बुटवल । नेकपा क्रान्त्किारी माओवादीले रुपन्देहीको बुटवलमा आज सभाको आयोजना गर्दै छ । क्रान्तिकारी माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सरकारले भारतलाई निर्माण गर्न दिएको अपर कर्णाली परियोजना खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनसहित विरोध सभा गर्न लागेको हो । बुटवलमा गर्न लागेको सभामा जनसहभागिता गर्नका लागि सात वटैं क्षेत्रका लागि जिल्ला नेताहरुलाई जिम्मेबारी तोकिएको छ । जस अनुसार […]
Kathmandu . The Communist Party of Nepal (Revolutionary Maoist) Chairman Mohan Baidya ‘Kiran’ said that thatadecade-long People’s War in Nepal was onlyarehearsal. Addressingaprogram organized in Party’s Central Office in Kupondole on the occasion of Basu Smriti Diwas on Thursday, he said the real kind of revolution is essential to fulfill […]
Posted in: English News, mainNewsLeaveacomment
दशवर्षे जनयुद्ध क्रान्तिको रिहर्सल मात्रै हो : अध्यक्ष वैद्य
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध रिहर्सलमात्रै भएको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीको कुपण्डोलस्थित नेवाः राज्य कार्यलयमा १७ अाैं वासु स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित स्मृति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहिदका सपना पूरा गर्नका लागि वास्तविक रुपमा क्रान्ति गर्न बाँकी नै रहेको बताए । अध्यक्ष वैद्यले भने, […]